Ahoana ny fomba hivezivezin'ny autopilot ao amin'ny Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05
fanontaniana Ahoana ny fomba hivezivezin'ny autopilot ao amin'ny Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05
1 taona 8 volana lasa izay #1075 by CaptZhade
Nizara izao ny fonosana mahafinaritra an'ny Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05.
Na izany aza anefa dia manana olana aho.
Isaky ny tsy mandeha aho dia tsy afaka mihetsika autopilot. Ahoana no anaovako an'izany? Ahoana no ahaizako miakatra, manidina, manidina sy ny sisa?
Sambatra raha misy afaka manazava izany amiko.
Misaotra amin'ny fonosana mahafinaritra.
1 taona 8 volana lasa izay #1081 by DRCW
Fantatrao ve ny default ny Airbus 321 FSX? Raha toa ianao ary tsy miasa ao anatin'ny poketra mega ... dia afeno ny rakitra ao amin'ny ordinateranao. Esory ny fiarovana ny aterineto ary alao ny rindrankajy indray ... Raha mila fahalalana bebe kokoa dia avelao aho hahafantatra
Fotoana mamorona pejy: 0.273 segondra